ဂျေ (J) ဝင်နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ကို ဒဲ့၀ုန်း လိုက်တဲ့ “မတ်မတ်သင်ဇာ” …. – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ဂျေ (J) ဝင်နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ကို ဒဲ့၀ုန်း လိုက်တဲ့ “မတ်မတ်သင်ဇာ” ….
ဂျေ (J) ဝင်နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ကို ဒဲ့၀ုန်း လိုက်တဲ့ “မတ်မတ်သင်ဇာ” ….
သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ ချောမော လှပတဲ့ ရုပ်ရည်၊ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပီပြင်ပြောင်မြောက်လှတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စား ဟန်ပန်တွေနဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က အလှူအတန်းမှာလဲ ရက်ရောသလို ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလဲ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်ကူညီ လှူဒါန်းပေးနေပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်က လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလဲ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ
တစ်သားတည်းပါဝင်ပြီး လမ်းပေါ်ထွက်ကာ တော်လှန် ရေးကြီးမှာ အားတက်တရော ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ တော်လှန်ရေးကြီးထဲမှာ သူမပြောတဲ့ စကားတွေကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲကို ထိစေခဲ့တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ သင်ဇာဝင့်ကျော်က သူမကို တို.က်.ခို.က်.နေတဲ့လူတစ်ချို့ကို မကြာခဏဆိုသလို အမိုက်စားစကားလုံးတွေနဲ့ ပြန်လည်ချေပတတ်ပါသေးတယ်။ ယခုတစ်ခါမှာလဲ သူမကို မနာလိုဖြစ်နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေကို အခုလို ပြန်လည်ချေပ ပြောဆိုထားပါတယ်။
သင်ဇာဝင့်ကျော်က “မနာလိုမဖြစ်ကြပါနဲ့နော် ဒီအသက် ၃၀ ကျော်အဖွားအို ကို ကောင်မလေး ငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေက မနာလို လာ ဖြစ်တာတွေ့ရတော့ ကွကိုယ်တောင် ဘဝင်မြင့်ချင်သွားတယ် ဟဟ တစ်ယောက်ထဲ ထိုင်ခွီမိနေပြီ” ဆိုပြီးတော့ ရီစရာလေးပါ ရေးသားဖော်ပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦးချင်းစီလဲ ကျန်မာချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း ဒီသတင်းကို တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်။
သ႐ုပ္ေဆာင္ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ကေတာ့ ေခ်ာေမာ လွပတဲ့ ႐ုပ္ရည္၊ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ပီျပင္ေျပာင္ေျမာက္လွတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို အခိုင္အမာရရွိထားတဲ့ မင္းသမီးတစ္လက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမိုက္စား ဟန္ပန္ေတြနဲ႔ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္က အလႉအတန္းမွာလဲ ရက္ေရာသလို ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြကိုလဲ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ပါဝင္ကူညီ လႉဒါန္းေပးေနပါတယ္။ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္က လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာလဲ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ
တစ္သားတည္းပါဝင္ၿပီး လမ္းေပၚထြက္ကာ ေတာ္လွန္ ေရးႀကီးမွာ အားတက္တေရာ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးထဲမွာ သူမေျပာတဲ့ စကားေတြကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ရင္ထဲကို ထိေစခဲ့တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္က သူမကို တို.က္.ခို.က္.ေနတဲ့လူတစ္ခ်ိဳ႕ကို မၾကာခဏဆိုသလို အမိုက္စားစကားလုံးေတြနဲ႔ ျပန္လည္ေခ်ပတတ္ပါေသးတယ္။ ယခုတစ္ခါမွာလဲ သူမကို မနာလိုျဖစ္ေနတဲ့ ေကာင္မေလးေတြကို အခုလို ျပန္လည္ေခ်ပ ေျပာဆိုထားပါတယ္။
သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္က “မနာလိုမျဖစ္ၾကပါနဲ႔ေနာ္ ဒီအသက္ ၃၀ ေက်ာ္အဖြားအို ကို ေကာင္မေလး ငယ္ငယ္ေခ်ာေခ်ာေလးေတြက မနာလို လာ ျဖစ္တာေတြ႕ရေတာ့ ကြကိုယ္ေတာင္ ဘဝင္ျမင့္ခ်င္သြားတယ္ ဟဟ တစ္ေယာက္ထဲ ထိုင္ခြီမိေနၿပီ” ဆိုၿပီးေတာ့ ရီစရာေလးပါ ေရးသားေဖာ္ျပထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုဖတ္ရႈေပးတဲ့ ပရိသတ္တစ္ဦးခ်င္းစီလဲ က်န္မာခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးရင္း ဒီသတင္းကို တင္ဆက္ေပး လိုက္ပါတယ္။
Previous post သီချင်း ဆိုရင်း တေးသရုပ်ဖော် နေတဲ့ ပြေတီဦး ကို ကြည့်ပြီးအားရပါးရ ရယ်မောကာသဘောကျနေတဲ့ အိန္နြာကျော်ဇင် ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
Next post အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ကြည့် ချင် လောက်အောင် ညှို့အား ပြင်း နေတဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ရဲ့ ဗီဒီယို